Zvakanakisa zvese-mu-one VR
$ 565 on Amazon
Zvirinani zvemitambo yakasarudzika
Kujeka, kudhizaina dhizaini
Mamwe makamera ekutevera
Yakawedzera zvinodhura / mashoma mitambo
Kwete kuwedzera kusachengetedzwa
Kubatana kwePC kunoda waya
Iyo Oculus Kutsvaga inoita yakasimba kesi kune akanakisa ese-mu-one VR musoro uri pamusika. Yake yepamusoro mukati-kunze yekutevera uye Guardian kamuri yekutevedza inokubatsira kuti ufambe nekukurumidza pasina desyncing kana kurovera mumadziro, uye izvo zvinoonekwa zvisina PC simba zvinonakidza zvese asi zvakanyanya kuomesa VR mafani. Inopawo raibhurari yakaregedzwa yemitambo yeVR yakanaka kwazvo yakagadzirirwa iyo Kuda.
Kwete zvebhizinesi chete
HTC Vive Focus Uyezve
$ 830 on Amazon
Yakagadzirirwa kushandiswa kwebhizinesi
Yakakura kunyorera-yakavakirwa raibhurari
Pasina waya PC VR
Yakadzika-mhando mutambo raibhurari
Kune yakakwira mutengo wepamusoro, iyo Vive Focus Plus ekes yakapfuura iyo yepamusoro-inotengesa Kuda mune yayo FOV, zororo reti, uye humwe hunhu hwakakosha. Iyo inopa zvinonakidza maficha evashandisi vane hunyanzvi: kiosk modhi yemitambo yekuratidzira, isina waya yemagetsi kune PC VR mitambo, uye sarudzo yekunyorera raibhurari yakakura yemitambo.
HTC inoshambadza iyo Vive Focus Plus seiri "yebhizimusi" muNorth America nemisika yeEurope, asi sechigadzirwa chemutengi muAsia. Ipo iyo-ye-imwe-isina-waya Oculus Kutsvaga yawana ratidziro dzekutamba uye yatengesa chaizvo kumadokero, iyo Vive Focus Plus yakafuratirwa nevazhinji vatengi vasina kujairika. Kunyangwe iwe uchida VR headset yebhizinesi kana mafaro, iyo Vive Focus Plus haifanire kufuratirwa; asi gwaro iri rinofanira kubatsira iwe kusarudza kuti ndechipi chishandiso chinokwana zvaunoda.
Kufananidza iyo Kuda uye Vive Focus Plus zvakanyanya pane kufanana kwavo nekusiyana kwavo. Iwe ungatarisira kuti Vive yakakura kwazvo kukunda iyo Kuda uchifunga yakakwira mutengo poindi, nepo zviripo, zvayo zvemukati zvinongopfuura iyo Inesita munzvimbo shoma dzinokosha.
Wireless / Zvese-mu-imwe? Ehe Ehe
Graphics Card Qualcomm® Adreno ™ 540 GPU Qualcomm® Adreno ™ 540 GPU
ndangariro 4GB 4GB
chengetedzo 64 kana 128 GB 32 GB
SD kadhi slot hapana Kusvikira ku2 TB
Anodzora mhando 2 Oculus Kubata vatongi 2 VIVE Focus Plus vatongi
Display Panel Dhiviri AMOLED Dhiviri AMOLED
Resolution 1440 x 1600 ziso rimwe nerimwe 1440 x 1600 ziso rimwe nerimwe
Refresh zvazvingava 72 Hz 75 Hz
IPD inogadziridzika mhando 58mm kuna 72mm 60.5-74mm
FOV ~ 100º ~ 110º
Battery upenyu Kusvikira maawa 3 Kusvikira maawa 3
Bhatiri recharge ~ 2 maawa ~ 2 maawa
uremu 571g 695g
Mhando yekutevera Mukati kunze (hapana ekunze ekunze) Mukati kunze (hapana ekunze ekunze)
Matanho esununguko (DoF) 6DoF 6DoF
Nhamba yemamera ekutevera china piri
Kudzora kwekuteedzera Inoteverwa necamera Inoteedzerwa kuburikidza ne ultrasonic sensors
Kubatanidzwa kweaudio In-strap odhiyo In-strap odhiyo
Nhamba ye3.5mmmm majetsi ekuteerera Piri One
Mitambo inowanika, mapurogiramu, uye zviitiko ~ 150 kuburikidza neOculus Store ~ 2000 kuburikidza neViveport / ~ mazana matanhatu ne Infinity
Chibatanidza chePC VR mitambo? Hongu, kuburikidza neOculus Link Hongu, kuburikidza neViveport Infinity
Iine imwecheteyo nhare Snapdragon CPU uye 4GB yekurangarira mune ese mahedhifoni, iwe uchaona iyo yakafanana nhanho yekuita mune ese ari maviri. Iyo Vive Focus Plus ine zvishoma zvadzikiswa mwero wekuzorodza, asi mutsauko we3 chete Hz hauzoonekwe kune vakawanda vatambi. Kunyangwe iyo lens resolution yakafanana, zvichireva chero maVR mitambo aunotenga, iwo anozoonekwa akangofanana zvakafanana zvisinei kuti ndeupi musoro wetsiva waunotenga.
Kunyangwe hazvo kufanana kwehardware, aya mahedhiyo eVR haachinjiki. Isu tawana zvakakosha uye zvakashata zvemidziyo miviri apo imwe inopenya zvakajeka kune imwe.
Mahedhifoni ose ari maviri ane maviri AMOLED lenses ane 1440 x 1600 resolution mune rimwe nerimwe ziso. Imwe yega yega inoita kuti iwe ugadzirise pamurume kureba kwepamusoro (IPD) kuenderana nechiso chako. Kunyange vachisiyana zvishoma pakudiki uye pakanyanya IPD, vese vane huwandu hwenzvimbo inosvika 14mm iyo inokomberedza huwandu hwehukuru hwesikuru. Saka vashoma chete vevashandisi vane vasina kujairika hupamhi kana zviso zvakatetepa vangangoda kudzivirira musoro mumwe kana mumwe.
Kana zvasvika kumunda wekutarisa (FOV), HTC yakagara ichirova Oculus mukureba uye hupamhi hwemunda, uye hapana chakachinja pazera rino. Nekusagadzikana, iyo Oculus Quest inongofanana neiyo yekutanga Rift CV1 muFOV maererano Mugwagwa kuVR, kurasikirwa neGo uye Rift S. Uye nepo iyo HTC Vive Focus Plus inokunda nemaonero ayo 110º, iyo nhamba haina kuchinja kubvira yekutanga HTC Vive.
Kana zvasvika kumunda wekuona (FOV), HTC yakagara ichirova Oculus mukureba uye hupamhi hwemunda.
Sezvineiwo, FOV haina basa zvakanyanya kune ese-mu-one mahedhifoni, nekuti zviri nyore kwazvo kutenderera kuti uone yako yekunze pasina mawaya achitevera kumashure. Kazhinji kutaura, vamwe vashandisi havafarire manzwiro asiri echisikirwo echimwe chinhu chinotadzisa kuona kwako, nepo vamwe vachichijairira icho nekukurumidza. Kana usati waedza VR kare uye usingazive kushivirira kwako kwemaonero mashoma, funga kutadza padivi rekuona zvakajeka uye kusarudza iyo Focus Plus. Asi isu tinotenda kuti hunhu hwekuona hunokosha kupfuura iyo yakati rebei FOV.
Panyaya iyi, iyo Quest ine mamwe ehunhu-hwe-hupenyu maricho asiwo yakakosha kuderera. Padivi rekuwedzera, Oculus akawana nzira yekugadzirisa chromatic aberrations - kurasikirwa kwehunhu hwemufananidzo nekuda kwekudikanwa kwekuparadzanisa RGB mavara mune akasarudzika pamucheto weVR lenses- isina yakakosha simba yekudonha. Izvi zvinokupa iwe inoyevedza, inoenderana munda unoona uyo usingazokanganisa kutaridzika-kutarisisa munharaunda yako. Zvakare, nekuda kweOculus 'yakasarudzika Simba Yakagadziriswa Yakaomeswa Kupa, mitambo ichaisa pamberi payo makrisimendi emukati mechiono chako, apo ichichengeta iyo yakaderera-gadziriso mifananidzo mune yepasirose yakakwira iyo iyo inogona Kubata ikozvino kubata.
Kune rimwe divi, Iyo Quest ine yakakurumbira mhuno yakakura gidhi, iyo inokonzeresa kushungurudzika kupenya pakatarisana nechiso. Takawana nzira dziri nyore dzekuita vhara mhino yemhino, asi ramba uchifunga kuti Chikamu chine ichi chakatsikiswa kunze kwebhokisi, nepo Focus Plus ine mashoma ataurwa matambudziko neizvi.
Zvese zviviri zvishandiso zvinofambisa kufamba kwako mukamuri rese uchishandisa 6DoF mukati-kunze yekuteedzera. Yako headset nevatongi vanogona kuteverwa mumatanho matanhatu: kumberi, kumashure, kumusoro, pasi, kuruboshwe uye kurudyi, ese asina chero ekunze ekunze.
Zvese zvishandiso zvakare zvine nzira yekutarisa yako yekunze nharaunda, ichigonesa yakavhenganiswa-chaiyo maitiro umo iwe waunogona kuona zvakakukomberedza mune nhema-uye-chena. Chero zvazvingaitika, iwe uchaisa nzvimbo yekutamba yekutevera-chiyero chekutevera; kana iwe ukasiya nzvimbo ino panguva yechiitiko, inozongoerekana yachinjira ku "Kamuri Yekutarisa" pane iyo Focus Plus kana "Passthrough +" paQuest. Paunenge uchiratidzika munguva, izvi zvinobatsira kuti usakuvara uye zvinokupa chivimbo chekumhanya uchitenderedza nzvimbo yako yekutamba isina kutya.
Oculus achangobva kuvandudza iyi modhi - saka iyo "yekuwedzera" yakawedzerwa kuPassthrough - kugadzirisa iyo stereo-chaiyo yekutevera uye kudzora kushushikana kwemaziso uchiri mune ino modhi. HTC yaimbovimba neStam VR mashandiro ekuronga miganhu yavo asi pakupedzisira yakatanga kuwedzera yayo yechinyakare chirongwa kune matsva mahedhifoni gore rapfuura.
Kuongororwa kwemusoro wemusoro kunogona kunge kwakafanana muchimiro uye mashandiro ezvese zviri zvishandiso, asi mutongi wekutonga anoshanda zvakasiyana zvakanyanya pakati pezvishandiso zviviri izvi.
Kuongororwa kwemusoro wemusoro kunogona kunge kwakafanana muchimiro uye mashandiro ezvese zviri zvishandiso, asi mutongi wekutonga anoshanda zvakasiyana zvakanyanya pakati pezvishandiso zviviri izvi. Kugonesa kutevedzera 6DOF kutevera mune yayo Oculus Kubata controlers, Oculus yakawedzera maviri maviri kamera kune iyo headset pachayo. Iwo maTouch controllers anoburitsa gumi nemashanu infrared maOD, rimwe nerimwe, zvichibvumira makamera kutora chaiwo emaoko emaoko ako kuburikidza ne data rekuona. Ipo Vive Focus Plus controllers vanoburitsa ma-ultrasonic ruzha panguva yakati rebei, zvichibvumira vhezheni kutaridza nzvimbo yavo pasina chero data rekuona.
Kuona kuti ndeipi system inoshanda zvirinani kupokana kwakaomarara. Zvinoreva Vive iyo mhinduro yayo yeultrasound inoshandisa simba shoma shoma, ichisunungura nzvimbo yekuverengera yemamwe mapurogiramu. Uyezve, zvinozivikanwa kuti infrared yekutevera inotambura mune chero nzvimbo ine yakasikwa mwenje kana isina kukwana mwenje.
Kune rimwe divi, mazhinji maVR masisitimu anoshandisa infrared nekuti zvinoratidzwa kuti zvinoshanda zviri nyore uye zvinobudirira mumamiriro akanaka. Panguva imwecheteyo, ultrasonic yekutevera yakanyanya kuyedza uye haina kuvhurwa panguva ino. Uye yedu Oculus Kuda ongororo akacherekedza kuti inonakidza sei iyo Yekutsvaga nzira yekutevera kune yemitambo-inokurumidza mitambo.
Sezvo nechero yevhidhiyo yemutambo wehondo, vatengi vanoitira hanya zvakanyanya nezvezvazviri sezvavanoita nezve Hardware yeconsole. Panyaya yehondo pakati pemidziyo miviri iyi, iyo yakanyanya kutarisisa yevatengi Oculus Kutsvaga yakaisa mari yakawanda muAAA yakasarudzika kupfuura bhizinesi rinotarisana neVive Focus Pro.
Iwe uri mukana wekuti ufare nekutenga kweOculus Chitoro maererano nehunhu asi usanyanya kufara maererano nemutengo.
Mamwe mazita anozivikanwa eVR mazita - Beat Saber, Vader Immortal, Moss, Job Simulator, Star Trek: Bridge Crew, Ramba Uchitaura uye Hapana Anoputika-zvese zvinoonekwa paOculus Store asi kwete paViveport. Viveport ine zvishoma kusarudzika kwayo, seMutambo weTrrones ruzivo Pamusoro peRusvingo uye inonakidza yakasangana-chaiyo yekurovedza muviri app HitMotion: Yakatambanudzwa. Kazhinji, zvakadaro, Viveport inozivikanwa nemimwe mitambo yeIndie uye shovelware, nepo Oculus ine mimwe mitemo yakasimba iyo mutambo wega wega unofanirwa kupfuura nekuongororwa uye nekugadziridzwa kwemidziyo yavo usati waoneka muchitoro chavo.
Mukuita, izvi zvinoreva kuti iwe uri mukana wekufara nekutenga kweOculus Chitoro maererano nehunhu, asi usingafare zvakanyanya maererano nemutengo. Oculus mitambo inowanzove nemitengo yakakwira, kunyanya tichifunga mitambo yakawanda yeVR ine nguva pfupi yekumhanya.
Kana iwe uri mumwe munhu anofarira Netflix -style kunyorera zvemukati pane kutenga yega mitambo inodhura, iyo Focus Plus inopa yakanakisa dhizaini neViveport Infinity. Nekuti $ 13 pamwedzi (kana $ 108 kana iwe ukabhadhara kumusoro), iwe unowana mukana kuwana kune raibhurari ye (ikozvino) pamusoro pe600 zviitiko zvisina waya. Vanoshandisa Oculus vachitsvaga imwe yakafanana anogona Nyorera kuViveport Infinity ivo pachavo, asi ivo vanogona chete kuwana iyo mitambo paCustom yavo kuburikidza ne wired Oculus Link yekubatanidza kune VR-yakagadzirira PC.
Kana mutambo uri wechipiri kunetseka, zvakadaro, uye iwe unoda mahedhifoni kunyanya ebhizinesi kana kusimudzira. Zvakanaka kutaura kuti iyo HTC Vive Focus Plus inopa mukana wakajeka muchikamu ichi (kana iwe uchida kubhadhara iwo mukana).
HTC inopa Enterprise Advantage chirongwa cheVive Focus Plus iyo inoita kuti iwe uite shanduko yezvinhu zvakaita seKiosk modhi, maunogona kudzora zvese asi mamwe maapuro kuvashandisi. Iyi ndiyo nzira yakanaka yekurerusa iyo VR chiitiko kana uchiedza kuratidza kuburitsa demo pane show floor.
Kupfuura zvese zveVive bhizinesi maitiro, sarudzo yekusimudzira kuchengetedza muVive Focus Pro inopawo mukana.
Iyo EA chirongwa zvakare inopa Batch Kurongedza uye Zvekudzika Kuendesa. Mukukosha, kana iwe uchida kutenga uye kushandisa akawanda mahedhifitesi ebhizinesi rako, unogona kuronga zvese zvekuisa kana kuisa zvinyorwa zvako kwavari panguva imwe chete, kudzivisa zvinonetesa, zvinodzokororwa set-up nguva. Zvakare, ivo vanopa encryption masevhisi kuti vadzivirire data rako ..
Beyond ese eVive bhizinesi maficha, iyo sarudzo yekukwiridzira kuchengetedza muVive Focus Pro zvakare inopa mukana. Nekadhi reS microSD, iwe unokwanisa kukwira kusvika ku2 TB yedata kuhedhifoni kana uchida kutenga kadhi rakakodzera. Izvi zvinobvumidza mutengesi wezvivakwa, semuenzaniso, kurongedza mafambiro ekuona edzimba dzakasiyana pachigadzirwa chimwe chete, uko 64 kana 128GB yakanyanya ingakugumira paOculus Kutsvaga.
NeChipinge, unogona kuchishandura kuchishandura kuita chishandiso chakanangana nebhizinesi. Nayo i-Android-based OS, iyo Inogona inogona sideload chero mapulogalamu aunoda kuburikidza neyekuvandudza modhi, chero iwe wakasununguka kudhiza zvakanyanya kumashure kwekupedzisira kwechigadzirwa. Izvo hazvisi chaizvo rakagadzirirwa nekuda kwayo, uye vashandisi vazhinji vanozonyatso gadzikana nebhizinesi mudziyo usinganzwe sekunge unoda "kubiwa."
Kune vashandisi veVive Focus Plus, imwe yakanakisa perk yeViveport Infinity ndeyekuti iwe unogona kuridza chero mitambo yePC VR kune yako headset ine 5GHz Wi-Fi kubatana. Iyo Oculus Kuda, sezvataurwa pamusoro apa, chete ine iyo wiring Link sarudzo inowanikwa. Ehe, wiring data kuendesa kazhinji ine nani kumhanyisa uye yakaderedzwa latency kana ichienzaniswa nekutakura isina waya, zvichiita kuti Oculus Link ive yakatonyanya kukosha sarudzo.
Pakupedzisira izvi zvinouya pasi kunyaradza uye nyore pamwe nekuita. Iyo poindi yezvese-mune-imwe misoro ndeye kwete kubata newaya, asi kuridza stuttering, yakaderera-performance vhezheni yeiyo yepamusoro-mifananidzo PC mutambo pamusoro peWi-Fi haifadzi futi. Tinokurudzira kunamatira neiyo wired sarudzo kudzamara zvaratidza kuti Wi-Fi inokwanisa kubata mazita anonyanya kuoneka.
Mutengo uye zvaunofarira
Iyo inonongedzera fungidziro paOculus Kuda inoita kuti zvinyanye kuomera HTC kupa chikonzero chakapetwa mutengo unonamira weVive Focus Plus. Nekudaro, nekuda kwe Kuda kugadzirwa kushomeka nekuda kweiyo coronavirus, vatengesi avo vachiri vane stock vari kukwiza Mutengo weti sticker padhuze neVive Focus Plus, vachiita yako sarudzo yekuti utenge zvakawedzera kuomesa.
Kana mutengo usiri chinhu, unogona zvirokwazvo kufunga nezve iyo Vive Focus Plus pro senzira inoshanda. Iine raibhurari hombe yemuno yezvinyorwa, yakafara nzvimbo yekutarisa, uye isina waya PC-ku-headset kutenderera inoratidza hukuru hukuru. Nekudaro, iyo Quest ine raibhurari yakasimba yezviri mukati, inotsigirwa ne Facebook kuda kubhadharira zvakasarudzika, uye zvichangowedzerwa kuQuest UX sekutevera neruoko, Passthrough +, uye Oculus Link zvinoratidza kuti kambani yakadyarwa zvizere mukuvandudza mahedhifoni kupfuura yakatosimba kare. nhanho yekuita.
Kunze kwekunge iwe uri kutenga zvakananga kune bhizinesi VR mhinduro, isu tinochengeta kuti iyo Quest ndiyo sarudzo yekusarudzika kune vese asi imwe niche yeVR mafeni.
$ 565 on Amazon $ 537 paWalmart
Kwakanakisisa kuteedzera kamuri-yakavakirwa VR
Oculus Kuda zvakashata zvinopfuura neipi nharembozha isina waya, yeVR inofanirwa kukwanisa kuita. Yayo mukati-kunze yekutevera inoita basa rakanaka pasina ekunze sensors, uye kusanganiswa kwemakanakiro emitambo yeChipinge uye iyo Oculus Link sarudzo yePC-level ruzivo inopa vatengi zvinopfuura zvakakwana zvemhando yepamusoro yekunakidzwa.
Anogona mutambo-unochinjika neisina waya PC VR
Mutengo waro wepamusoro uye kushambadzira kune varidzi vebhizinesi kunozovhundutsa vatengi vazhinji, asi pane zvakawanda zvekunakidzwa nezvevashoma veVR mafeni kana uchikwanisa kuzvitenga. Varidzi veVR-vakagadzirira maPC vachada sarudzo yekutamba zviitiko zvine simba zveVR zvisina kubatwa, uye raibhurari yakakura yeViveport Infinity inopa varaidzo isingaperi, inodhura.
Yakanakisa HTC Vive zvishongedzo 2020: Simudzira uye wedzera yako VR zviitiko neaya magajeti
HTC 11 kuburitsa zuva, nhau uye runyerekupe
Iwo akanakisa maVR mahedhifoni ekutenga 2020: Pamusoro chaiyo chaiyo giya
Zvinorevei Snapchat Emojis Zvinorehwa uye Maitiro Ekuzvishandisa
Maitiro ekumanikidza PDF muLinux [GUI & Terminal]
Chii chinonzi Apple's FaceTime uye Ndingachishandisa sei?
Kudhaunirodha Kwakundikana - Virus yakawana meseji pa Windows 10
SanDisk Yakanyanya Inotakurika SSD v2 uye WD Yangu Pasipoti SSD (2020) Ongororo
3 Nzira dzekuvhura Akawanda Mawebhusaiti Nekamwe Kinya muChannel
Maitiro Ekudzima iyo Printa Spooler Service pa Windows 10
Yakanakisa ruzha-kubvisa (ANC) mahedhifoni 2020 yekudzima ruzha rwekunze
Maitiro Ekuisa Android 11 On Windows 10 PC Kushandisa Android Studio
Pamusoro pezvishanu zviri kuuya zvinonzi WhatsApp pane Android, iOS: Facebook Story Sharing, Night Mode nezvimwe
Windows 10 Chigadzirwa Chekuita Uye Kuita Kuita: Nzira Yokuwana nayo uye Iyo Inoshanda Sei
Dzimwe nzira dzakanakisa dzeSonos
Gonesa vhidhiyo pamusoro peLTE, RCS, uye zvimwe zvinotakura zvinhu kuUS kukiyinura Samsung Galaxy Note 20